Mpomba an-dRavalomanana Marc : Maro no efa niala an-daharana -
AccueilRaharaham-pirenenaMpomba an-dRavalomanana Marc : Maro no efa niala an-daharana
25/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mba afaka ny hiaina ao anaty filaminana mihitsy ve ny malagasy madinika fa izay tian’ny mpanao politika hitondrana ny fiainany no tsy maintsy arahiny ? Rehefa tian-dRavalomanana Marc akorontana ve ny fiainanan’ny malagasy dia tsy maintsy hanaraka an’izany ? Fanontaniana mampieritreritra miantefa any an-tsain’ireo tsy mpanara-drenirano ny fironana politika izany. Antsoiny indray mantsy ireo mpomba azy sy ny olona izay afaka hanohana azy ho tonga etsy amin’ny Magro Behoririka, ka hanajanona an’izay asa famelomam-bady aman-janaka any aloha. Tsy maintsy tohanana hono ny hambom-pon-dRavalomanana Marc satria manirikiry azy loatra izao fitondrana izao, ka ianareo vahoaka madinika no tsy maintsy mijanona amin’ny asanareo avy any.
Tena misy tokoa aloha ireo andian’olona vitsivitsy efa tsy tompon’ny tenany intsony raha vao izany Marc Ravalomanana izany no resahina. Soa ihany fa vitsy an’isa. Tsy mahalala mpanao politika afa-tsy io olona io izy, na inona ambara aminy na inona. Tsy mahalala Filoha afa-tsy io izy na dia efa nampitondra faisana ny malagasy teto aza izany Marc Ravalomanana izany. Izay no mahatonga an-dRavalomanana mbola mihevi-tena azy ho Filoha rehefa miresaka an-gazety. Ireo andian’olona ireo no iantefan’ireny resany ireny. Tsy miantefa any amin’ireny olona ireny ny antso fahatongavan-tsaina satria olona efa sokajiana tsy hitondra fampandrosoana ny toa izany. Olona efa nametrahana ny kolontsain’ny « fanatisme » sy ny « culte de personnalité » ireny, ka tsy izy ireny mihitsy antsoina ho tonga saina.
Ireo olona tonga saina, mahiratra sy manana saina mandanjalanja no iantefan’ny fanontaniana eto hoe : « tsy efa ampy ve izay ny fanaovana ny vahoaka malagasy ho fitaovana politika e ? ». Mandehana miasa, ary aza mandany andro amin’ny fivoriana tsy hinanan-kanina. Ry zareo anie mibalady any an-dafy fotsiny e ! Ary manan-kohanina foana sy afaka miala voly hatrany an-dafy. Ianareo no maty mosary eo raha sanatria ka voaroaka amin’ny asanareo any. Aleo ho an’ny mpanao politika ny fanaovana politika, fa ianareo vahoaka tonga saina, aza manaiky rebirebena intsony. Ataovy ampy izay fahapotehana tamin’ny 2009 izay, hoy ny antso avo nataon’ny mpomba an-dRavalomanana Marc efa hatramin’izay. Ity ranamana ity moa dia isan’ireo tena nitolona ho an-dRavalomanana Marc saingy rehefa tonga teto io filoha teo aloha io dia voatsipaka ambava-fo, ka lesona lehibe ho azy mihitsy io nanaovan-dRavalomanana Marc azy io. Tsy izaho irery hoy izy no efa voatsipaka ambava-fo maromaro, ka tsy mba ho isan’ireo ho tonga handany andro etsy amin’ny Magro izany intsony izahay.